September 17, 2021 N88LeaveaComment on नेपाल अमेरिकासँग पराजित
काठमाडौं । आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग–२ अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एकदिवसीय अन्तराष्ट्रिय सिरिजमा नेपाल अमेरिकासँग पराजित भएको छ । ओमानको अल अमिरात क्रिकेट मैदानमा शुक्रबार भएको खेलमा नेपाल अमेरिकासँग ६ विकेटले पराजित भएको हो । नेपालले दिएको १ सय ७५ रनको लक्ष्य अमेरिकाले २९ ओभर ३ बलमा मात्र ४ विकेट गुमाएर पूरा गर्यो । अमेरिकाको जितमा […]
यी चार राशि हुनेहरूसँग सधैं रहन्छ लक्ष्मीमाताको कृपा, थाहा पाउनुहोस् !
September 17, 2021 N88LeaveaComment on यी चार राशि हुनेहरूसँग सधैं रहन्छ लक्ष्मीमाताको कृपा, थाहा पाउनुहोस् !
हुनत : धनसम्पति कमाउन र धनी बन्न धेरै नै मेहनत गर्नुको विकल्प छैन । तर केही राशिहरुका लागि भने भाग्यमा नै धनी बन्ने संभावना हुने गर्दछ । कतिपयले यसलाई किस्मत भन्दछन् । कुल १२ राशिमध्ये ४ राशिका ब्यक्तिलाई उनीहरुको भाग्यले नै धनी बन्न साथ दिन्छ। निम्न ४ राशिका ब्यक्तिले धेरै नै सम्पति कमाउँन सक्ने ज्योतिष […]
हिन्दु धर्मशास्त्र अनुसार हरेक दिन यस्ता काम गरे जिन्दगीभर मिल्नेछ फल
September 17, 2021 N88LeaveaComment on हिन्दु धर्मशास्त्र अनुसार हरेक दिन यस्ता काम गरे जिन्दगीभर मिल्नेछ फल
बुधबार बुध ग्रहको लागि समर्पित गरिन्छ। यस दिन गरिने केही कर्मले जिन्दगी भरी फल दिन्छ। बुधबार के गर्दा जिन्दगी समृद्ध हुन्छ, जान्नुहोस्:बुधबार गणेश भगवानको पूजा गर्नु फलदायी मानिन्छ। मन्दिर वा घरैमा गणेश भगवान वा दुर्गालाई पूजा गर्दा छिट्टै शुभ खबर पाइनेछ।बुधबार मुंगको दाल दान गर्दा कष्ट निवारण हुन्छ।जसको कुण्डलीमा बुध ग्रहको दो ष छ खासगरी […]
प्रचण्डले खुट्टा तान्न थालेपछि, ओलीसँग हारगुहार गर्दै देउवा प्रतिनिधि पठाए बालकाेट
September 17, 2021 N88LeaveaComment on प्रचण्डले खुट्टा तान्न थालेपछि, ओलीसँग हारगुहार गर्दै देउवा प्रतिनिधि पठाए बालकाेट
काठमाडौं । असार २९ गते पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता सम्हालेको आज ६६ दिन पुग्यो । तर मन्त्रिपरिषद नै विस्तार गर्न सकेका छैनन् । सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादवका कारण प्रधानमन्त्री देउवा चेपुवामा परेका छन् । न प्रभावकारी ढंगले सरकार चलाउन पाएका छन् न त चाहेर पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार […]
कांग्रेस महाधिवेशन थप रोचक: धनराज गुरुङले पनि गरे महामन्त्री लड्ने घोषणा
September 17, 2021 N88LeaveaComment on कांग्रेस महाधिवेशन थप रोचक: धनराज गुरुङले पनि गरे महामन्त्री लड्ने घोषणा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन निकै रोमाञ्चक बन्ने भएको छ । पार्टीका केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङले महामन्त्री पदमा उम्मेद्वारी दिने घोषणा गरेपछि महामन्त्रीको टक्कर झनै रोमाञ्चक बन्ने भएको हो । उनले आफू महामन्त्रीको पदमा लड्ने तयारीमा व्यस्त रहेको बताएसँगै पार्टी नै तरंगित बनेको छ । पार्टीका प्रभावशाली युवा नेताहरू गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र […]
September 17, 2021 N88LeaveaComment on शंकर पोखरेलविरुद्ध बिमलाले हालेको मुद्दा प्रहरी कार्यालयबाटै गायब
काठमाडौं । आफूलाई अपहरण गरेर बन्धक बनाएको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य बिमला ओलीले पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एमाले नेता शंकर पोखरेलसहित चार जनाविरुद्ध बुटवल प्रहरीमा किटानी जाहेरी हिएकी थिइन् । बुटवल प्रहरीले दर्ता नगरेर दाङ प्रहरीलाई इमेलमार्फत पठाएको उक्त उजुरी अहिले गायव पारिएको छ। पोखरेलविरुद्ध रुपन्देही प्रहरीमा वलीले दिएको अपहरण तथा शरिर बन्धक सम्बन्धी मुद्दा नै गायब […]
भीम रावलको यो घोषणासँगै नेकपा एमाले तीन टुक्रा !
September 17, 2021 September 17, 2021 N88LeaveaComment on भीम रावलको यो घोषणासँगै नेकपा एमाले तीन टुक्रा !
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले एमाले फेरी फुट्नसक्ने संकेत गरेका छन् । गृह जिल्ला अछाम जाने क्रममा बिहिबार डोटीका नेता तथा कार्यकर्तासँगको भेटघाटका क्रममा उनले राजनीतिक दलले जुनसुकै पार्टी जतिबेला पनि फुट्न सक्ने दाबी गरे । नेता रावलले अहिलेको जटिल परिस्थितिमा एमालेप्रति चिन्ता व्यक्त गर्ने सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकले पार्टी एकता प्रक्रियालाई अझै […]
ओलीलाई दुर्गा प्रसाईको चुनौती– झापामा मसँग चुनाव लड्न आउनोस् !
September 17, 2021 N88LeaveaComment on ओलीलाई दुर्गा प्रसाईको चुनौती– झापामा मसँग चुनाव लड्न आउनोस् !
काठमाडाैं । मेडिकल कलेज सञ्चालक दुर्गा प्रसाईले पूर्वप्रधानमम्त्रीहरु केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई झापामा आफु विरुद्ध चुनाव लडेर देखाउन चुनौती दिएका छन् । क्यानडा नेपाल नामको युट्युव च्यानलले भदौ ७ गते अपलोड गरेको अन्तरवार्तामा प्रसाईले जनताको नजरमा ओली, प्रचण्ड र शेरवहादुर देउवाको तुलनामा जनताले आफुलाई पत्याउने दावी गर्दै शंका लागे आफुसँग चुनाव लड्न […]
जब शाक्यकै अगाडि बादललाई बाग्मती प्रदेश इन्चार्ज भनियो …..
September 17, 2021 N88LeaveaComment on जब शाक्यकै अगाडि बादललाई बाग्मती प्रदेश इन्चार्ज भनियो …..
काठमाडौं । २ जेठ २०७५ मा फर्कने १० बुँदे सहमतिअनुसार एमालेको बाग्मती प्रदेश इन्चार्ज पार्टी उपाध्यक्षसमेत रहेकी बाग्मती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य हुन् । तर, उनलाई प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी नदिइएको काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित एमाले जिल्लास्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा देखियो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि थिए, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । अतिथिमा पार्टी उपाध्यक्ष एवं बाग्मती प्रदेशकी […]
September 17, 2021 N88LeaveaComment on मीनभवनमा रामकुमारी झाँक्रीको खोजी
काठमाडौं । मीनभवनस्थित भीएस निकेतन स्कुल नजिकै खोलिएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी कार्यालयको बार्दलीमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरूले मुठ्ठी उठाएर कार्यकर्तालाई सन्देश दिए- हामी यहाँ छौं । भुइँमा बसेका कार्यकर्ताले नेताका अनुहार पढे । केहीले खल्लो महसुस गरे । नेताको लहरमा अभाव झल्कियो, सो पार्टीकी प्रभावशाली नेतृ रामकुमारी झाँक्रीको । पार्टी दर्ताका बेला निर्वाचन आयोगमा […]